UMengameli waseZimbabwe uvakashele kuleli ukuzohlangana nabatshali-zimali | isiZulu
UMengameli waseZimbabwe uvakashele kuleli ukuzohlangana nabatshali-zimali
UMengameli Zuma usefikile eZimbabwe
Abagibeli basale dengwane indiza iphelelwa uphethiloli
Uthole isibhaxu wabanjwa inkunzi ovale 'esomubi'
Harare – UMengameli waseZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa uzoba yingxenye yenkomfa yosomabhizinisi ePitoli ngoLwesine.
Lo mengameli ukuleli ngezinhloso zokutakula umnotho waseZimbabwe njengoba efuna ukuheha abatshali bezimali.
Ngokwephephandaba laseZim, iHerald, ihhovisi leNxusa laseZimbabwe elizinze eNingizimu Afrika likhiphe isitatimende ngoLwesibili limema bonke osomabhizinisi baseZimbabwe abazinze kuleli ukuba babe yingxenye yale nkomfa.
"INxusa u-Isaac Moyo umema zonke izakhamuzi zaseZimbabwe ezizinze eNingizimu Afrika kanye nabo bonke osomabhizinisi abanentshisekelo yokuba yingxenye yale nkomfa bafike. UMengameli u-ED Mnangagwa uzokwethula inkulumo yakhe kule nkomfa njengomengameli waseZimbabwe,"kusho lesi sitatimende.
OLUNYE UDABA: Owesilisa uvele enkantolo ngokubiza uMengameli omusha ngombulali
Lolu wuhambo lokuqala lwalo mengameli selokhu athatha izintambo ngomhlaka 24 Novemba 2017 kanti lolu hambo luza ngemuva kokuthi uNgqongqoshe wezeziMali uPatrick Chinamasa abeke isabelo sezimali sango-2018 nesibalule ukubaluleka kwabaxhasi kanye nabatshali bezimali kanye nezinhlelo zokulwa nenkohlakalo nokusebenzisa imal ngobudedengu.
Kwinkulumo yakhe yokuwala uMengameli uMnangagwa wakhuluma ngokubaluleka kokukhulisa umnotho kanye nokwakha amathuba omsebenzi.
Bagwetshiwe onogada ababonakala kwi-video bedubula emoyeni eHillcrest
INkantolo yeMantshi yasePinetown igwebe onogada abathathu abasebenzela inkampani ezimele ngemuva kokulahlwa yicala lokuqhumisa isibhamu emphakathini, eHillcrest, eThekwini.